KRK Engineering & Construction CO.,LTD. - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
KRK Engineering & Construction CO.,LTD.
09-5193070, 09-5064891,09-77827778, 09795995313, Website
Block (H), Room (8), Shwe Sabae Avenue, Bayint Naung Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
About KRK Engineering & Construction CO.,LTD.
KRK Engineering & Construction CO.,LTD. ၏ စီမံကိန်းအသစ်များ
အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်ရှိ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုအခန်းများ
Advertised by KRK Engineering & Construction CO.,LTD.
Listed on 13 January 2016
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ3း,692
KRK Engineering & Construction CO.,LTD. | condo အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Advertiser : KRK Engineering & Construction CO.,LTD.
မေတ္တာလမ်းမပေါ်ရှိ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုအခန်းများ
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိ မကြာမီပြီးစီးတော့မည့်တိုက်ခန်းများ
Listed on 12 January 2016
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ6း,438
KRK Engineering & Construction CO.,LTD. | apartment အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိတိုက်ခန်းများ
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ပြီးစီးပြီးသောတိုက်ခန်းများ
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး4,913
အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD. ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို Penthouse
Advertised by KRK
ဧရိယာ : 1026 sqft
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို Penthouse
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,000 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို (၇) လွှာ
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို (၇) လွှာ
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,100 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို (၆) လွှာ
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို (၆) လွှာ
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ပဉ္စမထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ပဉ္စမထပ်
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို စတုတ္ထထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို စတုတ္ထထပ်
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို တတိယထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို တတိယထပ်
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ဒုတိယထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ဒုတိယထပ်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,250 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ပထမထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို ပထမထပ်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,350 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို မြေညီထပ်
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းမပေါ်က ကြိုပွိုင့်ကွန်ဒို မြေညီထပ်
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,000 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိ ပဉ္စမထပ် ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိ ပဉ္စမထပ် ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	400 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိ မြေညီထပ် ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ (၁၀) ရပ်ကွက်ရှိ မြေညီထပ် ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,400 သိန်း
Asking Price : 1,400 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ပဉ္စမထပ်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ပဉ္စမထပ်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	350 သိန်း
Asking Price : 350 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် တတိယထပ်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် တတိယထပ်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	450 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	500 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ပထမထပ်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် ပထမထပ်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	550 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် မြေညီထပ်တိုက်ခန်း
KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကောလိယ (၂၂) လမ်းရှိ ကြိုပွိုင့် မြေညီထပ်တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	700 သိန်း
ရောင်းရန် - Mother Land မှဆောက်လုပ်သည့် ရွှေဘုံသာအလယ်ဘလောက် ကျော်မျက် မှန်ဆိုင်အပေါ်ထပ်9 လွှာ
Mother Land မှဆောက်လုပ်သည့် ရွှေဘုံသာအလယ်ဘလောက် ကျော်မျက် မှန်ဆိုင်အပေါ်ထပ်9 လွှာ
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,500 သိန်း
Asking Price : 2,500 သိန်း
အီးမေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရန် အမည် အီးမေး တယ်လီဖုန်း အကြောင်းအရာ သိလိုချင်တဲ့အချက် Enter the Captcha Submit